musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Australia Capital Territory Inopinda Yakazara COVID Lockdown
Airlines • nhandare yendege • Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Australia Capital Territory inopinda yakazara COVID kukiya
Pasi pekuvharirwa, vagari vemuCanberra nenzvimbo dzayo dzakapoteredzwa vanongobvumidzwa kubva pamba nekuda kwezvikonzero zvakakosha zvinosanganisira basa rakakosha, hutano, kugadzwa kwejekiseni, kutenga zvekutengesa uye awa rimwe chete rekurovedza muviri pazuva.
Australia Capital Territory yakanyorera yayo yekutanga COVID-19 kesi mune rinopfuura gore.
Murume uyu aive achitapukira munharaunda isina kwaanoziva hutachiona.
Iyo nharaunda yaizopinda mukukiya kwemazuva manomwe kubva na5: 00 pm nguva yemuno neChina.
Andrew Barr, gurukota guru reAustralia Capital Territory (ACT), akazivisa kuti dunhu iri raizokiya mushure mekunyora nyaya yavo yekutanga yeCOVID-19 mune rinopfuura gore.
Iyo ACT ichagara pakukiya kwemazuva manomwe kubva na5: 00 pm nguva yemuno neChina mushure mekunge murume ane makore makumi maviri kuyedzwa aine coronavirus.
The Australian Capital Territory Utano hwakati murume uyu aive nechirwere munharaunda musina kwaanoziva hutachiona.
Iyi ndiyo kesi yekutanga yeCOVID-19 yakawanikwa munharaunda yeCIT mumwedzi inopfuura gumi nembiri.
"Iyi sarudzo yekuvhara ndeye mhedzisiro yenyaya yakanaka mudunhu, nyaya yanga ichitapukira munharaunda," akadaro Barr. "Parizvino hatizive kwakabva hutachiona, asi kuferefetwa kwakawanda kuri kuitwa kwemaawa akawanda."
"Iyi ndiyo njodzi yakakomba yehutano hweveruzhinji yatakatarisana nayo mudunhu gore rino, chaizvo, kubvira kutanga kwedenda," akawedzera.
Jesse Chang anoti:
Nyamavhuvhu 12, 2021 pa14: 05
Mamwe maguta pasirese anofanirwa kudzidza kubva kuAIT!